Tower Ultra khafiifiye kululeeyaha
Lianchuang Group waxaa lagu abaalmariyay inay tahay 10-ka ugu sareeya Shirkadaha Dhoofinta Alaabada Guryaha
Bishii Diseembar 23, 2020, Shirka 8-aad ee Summit Summit ee Shirkadaha Shiinaha ee Qalabka Qalabka elektaroonigga ah iyo Munaasabadda Soodhaweynta Qalabaynta Elektaroonigga ah ee Shiinaha ee 2020 ayaa si guul leh loogu qabtay Shunde, caasimadda qalabka Shiinaha ee Shiinaha. Iyadoo hal ku dhig looga dhigay “D ...
Fannaanka Wareegtada ah ee Lianchuang wuxuu ku guuleystay "2020 Jarmalkii iF Design Design"
Maalmo ka hor, billadaha "2020 German iF Design Award" ayaa loo diray shirkadda ku guuleysatay abaalmarinta - Lianchuang Electric, oo hoosaad ka ah Lianchuang Technology Group, ayaa sidoo kale heshay abaalmarintan iyada oo si madaxbanaan loogu talagalay Pedestal Air Circulator Fan vertical wareegaya. ..
Canton Fair Global Share —- Lianchuang Technology Group ayaa markale ku dagaallamaya Carwada Carwada ee daruuraha
Maalmo ka hor waxaa si rasmi ah u furmay Carwada Carwada Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Shiinaha ee 128 (Carwada Canton) Cudurka faafa ee adduunka ayaa saameeyay, sanadkan Canton Fair ayaa wali sii wadaya qaabka lagu soo bandhigayo khadka tooska ah, iyadoo la tusaayo tikniyoolajiyadda Shiinaha iyo wax soo saarka isticmaalayaasha adduunka. Alaabooyinka ay soo bandhigeen Lianc ...
Subaxnimadii Oktoobar 13, Lianchuang Technology Group waxay shir wadajir ah ku qabteen rubuca saddexaad ee 2020 ee Lianchuang Academy. Gudoomiyaha Kooxda Lai Banlai, Agaasimayaasha Kooxda Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, Gudoomiyaha Kaaliyaha Lai Dingquan iyo hogaamiyeyaal kale, iyo sidoo kale hogaamiyaha kala duwan ee kooxda ...
Miyaa qaboojiyaha loo isticmaali karaa kululaynta xilliga qaboobaha?
Qaboojiyaha hawada waxaa loo isticmaali karaa kululaynta xilliga qaboobaha. Qaboojiyeyaasha hawadu waxay u qaybsan yihiin laba nooc: mid waa hal qaboojiye nooca hawo qaboojiyaha ah, midka kalena waa qaboojiye iyo kuleyl laba-qaboojiye haweed. Kan hore waa la qaboojin karaa oo keliya, kan dambena ma aha oo kaliya qaboojiyaha laakiin sidoo kale kuleylka, laakiin ...
Qaboojiyeyaashu waa aaladaha ugu isticmaalka badan ee qaboojinta xagaaga. Waxay guud ahaan go'an yihiin. Si loo sahlo, waxaa suuqa ku jira qaboojiyeyaal mooneyaal ah iyo qaboojiyeyaal, oo aan midkoodna go'an. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya qaboojiyeyaasha moobiillada iyo qaboojiyeyaasha? 1. Maxaa ...
Si loogu dabaaldego Fagaaraha Mid-Dayrta oo loo dabaaldego Maalinta Qaranka, Guddiga Xisbiga ee Lianchuang Science and Technology Park waxay qabteen munaasabad mowduuc ah keega gacanta lagu sameeyo ee wata baraf baraf wata
Waa sanad kale oo dib isu soo laabasho dayax ah, iyo sanad kale oo ah Dabaaldega Dayrta-Dhexe. Munaasabada Ciidda-Deyrta-Dhexdeeda, si loogu oggolaado qof walba inuu dareemo soo jiidashada dhaqanka hiddaha iyo dhaqanka isla markaana abuuro jawi xafladeed oo xoog leh, fiidkii Sebtember 22, Lianchuang Science and Technology Pa ...
Sanad guurada 27aad ee Lianchuang, Ruuxa Shenzhen
Magaalo waxay leedahay ruuxiisa gaarka ah. Shenzhen, dadka qaar waxay dhahaan, "Dib uguma laaban karo magaaladiisii, mana ka tagi karo Shenzhen sidoo kale". Waxa aan ka fahmi karno xukunkan ayaa ah in laga yaabo inay ka baxsan tahay magaalada Shenzhen, waligaa ma heli doontid ruuxi hal abuurnimo gaar ah leh iyo dareenka ay sameeyeen jawiga magaalooyinku ...
Miis Cusub Daahfurka Miis-kululeeyaha kululeeyaha DF-HT5385P
Horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa si madaxbanaan ugu noolaada, oo ay la timaaddo shakhsi ahaaneed baahiyaha maalinlaha ah. Si loo daboolo baahida suuqa, Miiskeena kululeeyaha kululeeyaha DF-HT5385P ayaa abuurmay. Cabbir yar laakiin tamar weyn. Marka hore, aan diirada saarno waa faahfaahin ...
Ammaan iyo Riyooyin - Lianchuang's 27 sano ee koritaanka
Ammaan iyo Riyooyin - Lianchuang 27 sano oo koboc ah Sannadkii 1993-kii, waxsoosaarkii ugu horreeyay ee Lianchuang wuxuu ka soo baxay raadiyaha sumadda Dunida Hees ayaa ka timid raadiyaha saqbadhkii sidii oo dhagta laga yeerayo Sannadkii 1998-kii, Qaboojiyihii ugu horreeyay ee gudaha ayaa soo baxay qaboojiyaha sumadda ee Lianchuang. In 2000, paten ugu horeysay ...
Lianchuang Appliance ayaa ku guuleysatay Abaalmarinta Dot Award - abaalmarinta "Oscar" ee Warshadaha Naqshadeynta ee shanta sano ee isku xigta
Dhawaan, liistada guuleystaha Jarmalka ee Dot Award Award 2020 ayaa lagu dhawaaqay. Wax soosaarka fikradda ah Convection kululeeyaha loogu talagalay Lianchuang Appliance, oo hoosaad u ah Lianchuang Technology Group, ayaa laga soo xulay in ka badan 60 dal oo adduunka ah, wuxuuna ku guuleystay "Red Dot Design Conc ...
Iibsaday taageere wareegaya laakiin u isticmaalay taageere dhaqameed? Waxaad u baahan tahay inaad fahanto qodobadan!
Xagaagii waa halkan, oo inta jeer ee taageerayaasha ayaa sii kordheysa. Sida bilowga taageerayaasha, taageerayaasha wareegga hawada waxay umuuqdaan inaysan ka duwanaaneyn taageerayaasha korontada ku taagan dabaqa caadiga ah, laakiin sicirkaan, waxaan ognahay in labadoodaba aan la barbardhigi karin. Laakiin weli waxaa jira dad badan oo iibsaday hawo ...